Ụbọchị My Pet » Ime Sense nke dịwara na Mmekọrịta
emelitere ikpeazụ: Jan. 15 2021 | 2 min agụ
Mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ otu n'ime ihe ndị ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụla onye na-abịakwute na ọ dịkarịa ala ụfọdụ n'echiche nke ụjọ na otu oge ma ọ bụ ọzọ. Ka emechara, na-emeso mmekọrịta bụ mgbagwoju anya na mgbe ụfọdụ ọ fọrọ nke nta ka ekwe chepụta ihe ọ bụ na onye nke ọzọ na-elekwasị anya n'ezie. Ndị mmadụ na adọga ịhụ otú ha na mmekọrịta mgbe na-eche na-aga na ihe akara ụbọchị ga-enye ha ihe nhọrọ, naanị adọga ịhụ otú ha na ọbụna ihe mgbagwoju anya okwu dị ka a n'ihi na ha na ụba mgbalị.
E nwere ọtụtụ ihe mere na nke a mere, sitere na site enweghị ike na-ekwurịta okwu n'ụzọ dị irè iji eziokwu na ndị mmadụ na mgbe ụfọdụ chọrọ kpamkpam dị iche iche ihe ha mmekọrịta. Ozi ọma ahụ bụ na ọ dịghị mkpa na-abụ ndị a siri ike.
Otu n'ime ụzọ ndị na-atụ egwu na-atụ ụjọ nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ ịnọgide na ihe niile tụsaara ná mmalite. Ọ dịghị mkpa na-atụ egwu ma ọ bụ na-emenye ụjọ banyere a mbụ ụbọchị n'ihi na ọ bụ kpọmkwem na, a mbụ ụbọchị. Ọ dịghị mkpa n'ihi na e nwere onye na-abụọ ụbọchị ọ bụrụ na ihe na-adịghị aga nke ọma. A mbụ ụbọchị a ga-ele anya n'elu dị ka ohere iji na-emeghe ma na-eme ihe n'eziokwu na mkparịta ụka onye ọzọ iji chọpụta ihe banyere onye ahụ na N'aka, ekwe ka onye ahụ chọpụta ihe banyere gị.
Naanị ihe na ndị mmadụ na iyi na-emesi ihe banyere karịa ịga na mbụ ụbọchị na-na-na mbụ ụbọchị. Yiri ka ụfọdụ ndị na-enweghị nsogbu ọ bụla na-ụbọchị mgbe ụbọchị. Ndị ọzọ na-ahụ ya nke ukwuu siri ike. N'ọnọdụ ndị dị otú ahụ dị ka ndị a, ọ pụrụ ịbụ na-enye aka na-ahu nagide a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị website ma ọ bụ na-ekere òkè na ihe ndị na-haziri maka inyere ndị mmadụ aka ịchọta a ụbọchị. Ndị ọzọ ndị mmadụ na-adịchaghị ọma na ụbọchị na e nnoo buworo ụzọ mee ndokwa ma na-achọta pụrụ iche na usoro iji hụ na ha ga-enweta a na ụbọchị na a ọzọ omenala ejiji. Kwere ya ma ọ bụ, otu n'ime ndị kasị ukwuu ebe ina jụrụ si na a na ụbọchị bụ na nkịta ogige.
E nwere ihe banyere owning a nkịta na etịbede ice. Ọ bụ mfe ịkọrọ onye banyere ha Pita karịa ka ọ dị na-ekwurịta banyere ụfọdụ ihe ndị ọzọ. Ọ na-enye gị ohere ikwu ihe na onye mgbe ị ọ ga-kwuru ihe ọ bụla na niile ị nọwo na-ọzọ ọnọdụ. Mgbe ihe nile na-atụle, Ọ bụ ihe ijuanya na nkịta ogige dị otú ahụ a na-ewu ewu n'ebe na-mmasị n'ebe onye na. Ọ na-enye gị ihe na-ekwurịta banyere na na ị maara ma ọ bụrụ na ị na-jụrụ si na a ụbọchị otu onye nke nwere ha Pita na abụọ nke i nwere dịkarịa ala otu ihe jikọrọ.
N'ókè bụ na gị na ịke nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ga-emecha ga-kegide àgwà gị na otú ị na-ekpebi ime ihe dị na n'ozuzu. Nke ahụ ga-enyere gị aka ikpebi otú na-na mbụ ụbọchị. Ozugbo ị ga-esi n'ebe, ihe kacha mkpa icheta bụ na-akparịta ụka ìhè na-ekwe ka ọ na-ewe gị n'ebe ọ bụla ọ pụrụ ị. N'ihi na ọ pụrụ nnọọ ịbụ na onye kwesịrị gị na njedebe.